एकैपटक ह्वात्तै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ, अब लिटरलाई कति ? - Mitho Khabar
एकैपटक ह्वात्तै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ, अब लिटरलाई कति ?
June 3, 2022 mithokhabarLeaveaComment on एकैपटक ह्वात्तै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ, अब लिटरलाई कति ?
सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा १० रूपैयाँ घटाएको हो।
नेपाल आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्यसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १७० रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १५३ रूपैयाँ लिटर पर्नेछ।
एलपी ग्यासको भने मूल्य यथावत, एक हजार ८ सय रूपैयाँ नै छ। त्यस्तै हवाइ इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य लिटरको १६६ रूपैयाँ छ। बुधबार मात्र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसीले) नेपाललाई नयाँ मूल्य पठाएको थियो।
आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएसँगै आगामी १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ७ करोड पचास लाख रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको थियो। बिहीबार नेपाली बजारमा भाउ कम भएसँगै अब आगामी पन्ध्र दिनमा निगमको घाटा बढेर तीन अर्ब ८९ करोड ५२ लाख पुग्ने देखिएको छ।
अब निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१.४१ रूपैयाँ र डिजेलमा २८.३३ रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। निगमको पेट्रोल खरिद लागत भने २०१.४१ रूपैयाँ र डिजेलको १८१.३३ रूपैयाँ छ।
त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ८ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ।
निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको ५.४४ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.४६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.६७ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
अहिले मट्टीतेलको खरिद लागत १४७.४६ रूपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको १४८.५४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फको १२७.७३ रूपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ।
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको थियो। चुनावपछि ह्वात्तै बढेको मूल्य घटाउन माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका थिए। सरकारले यसपालिको बजेटमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने घोषणा पनि गरेको थियो।
बुधबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यो हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सिसडोललाई एक हप्ताभित्र दूर्गन्धमुक्त बनाउँछौं : मेयर वालेन्द्र साह
तारा एयरको एयरहोस्टेस कृष्मीको अ’न्तिम बिदाई पछि, आमाको अ’वस्था यस्तो… (हेर्नुहोस्)
April 17, 2022 mithokhabar
मेमोरी किङ भनिने शाहीको गुनासो:न राज्यले चिन्यो,न जनताले; म नेपालमा जन्मिनु भुल रहेछ